Fiaraha-mientana hisian’ny hoavy mampiaty kokoa · Global Voices teny Malagasy
Fiaraha-mientana hisian'ny hoavy mampiaty kokoa
Voadika ny 17 Jona 2022 6:26 GMT
Sary fanaingoana an'i David Canul (Pájaro Toj) ho an'ny Rising Voices.
Ny taratasim-baovaontsika isam-bolana dia manome famintinana ireo lahatsoratra am-bilaogy vao haingana miresaka momba ny lafiny rehetra mahakasika ny fampiatiana nomerika, toy ny fidirana sy ny fampiasana ireo fitaovana nomerika, ary hatramin'ireo fomba sy hirika samihafa ho an'ny vondrom-piarahamonina mba handraisany anjara feno amin'ny aterineto. Vakio eto ny fanontàna teo aloha amin'ity gazety ity.
Arahabaina ianareo mpamaky, toy ny ahoana ny nitondran'ny volan Jona anareo? Misy zavatra mendrika hozaraina ve? Izahay manana iray!
Nanomboka tamin'ny volana May, mpikatroka nomerika folo ho an'ireo fiteny vao mipongatra avy amin'ny Fanjakana Meksikàna ao Chiapas, Quintana Roo sy Yucatan no nanatevin-daharana antsika tao anatin'ny 2022 Mayan Languages Digital Activism Fellowship Program (Fandaharanasa famatsiambola ny fikatrohana nomerika ho an'ireo fiteny Mayàna), haharitra valo volana. Mandritra io fotoana io, handray anjara anatina dingana fifanabeazan'ireo mitovy aminy izy ireo, mifototra amin'ny fampivelarana ny traikefa izay hanampy azy ireo hampandroso ny tetikasam-piarahamonina azy ireo manokana.
Maniry ve ianao ny handre bebe kokoa ny traikefan-dry zareo sy ny fivoarany ? Maninona raha atomboka eto ary manaraka tsy tapaka ny vaovao farany ?
Raha nirotsaka ho amin'ny dia lavitr'ezaky ny IDIL2022–2032 miaraka amin'ireo mpikatroka ho an'ny fiteny manerana ny tany, manomana ho anao andiany iray hafa amin'ny fanentanana Twitter mihodina ny Rising Voices sy ireo mpiara-miombon'antoka aminy. Liana ve ianao ny hahalala ny fiteny vazimba teratany, vitsy an'isa, andalam-panjavonana na tsy manana loharanon-karena firy, miampy ny fomba fandraisana anjaran'ny aterineto sy ny teknolojia amin'ny fampiroboroboana sy famelomana indray azy ireo? Andao hanaraka anay ary henoy izay zarain'ireo vahiny nasainay !
Edy Benajmín López Castillo [es] momba ny Jakalteko/Popti’ (fiteny Mayan iray), tenenina ao Goatemala
Comunidad Elotl [es] momba ny teknolojian'ny fiteny sy ny fampiharana azy ireny amin'ny fiteny vitsy an'isa, manasongadina an'ireo mpiara-miasa sasany amin'ny vondrom-piarahamonina virtoaly sy ny asan'izy ireo manodidina ireo fitenim-paritra isan-karazany
Marcos Pech [es] momba ny maayat’aan (fiteny Mayan), teratany any Meksika sy Belize
Felipe H. López [es] momba ny Zapotec, tenenina ao Meksika
Luis Flores [en] [es] momba ny Tének, tenenina ao Meksika
Satdeep Gill momba ny Punjabi, fiteny teratany ao amin'ny faritra Punjab ao Pakistàna sy India
Bali Nangavulan momba ny Bunun, tenenina ao Taiwan
Zaman Sagar momba ny Gawri, tenenina ao Pakistàna
Shagz Chronicles momba ny Kikuyu (fiteny Bantu), tenenina indrindra ao Kenia
Siki Dlanga momba ny South African Indigenous Languages Action Forum (aka ILAF) sy ny andraikiny amin'ny fiarovana ireo ezaka eo an-toerana hampiroboroboana ny fiteny teratany
Lucy Chinyeaka Iwuala momba ny Igbo, fiteny teratany ao Nizeria
El Hadji Ibrahima DIAGO momba ny Wolof, tenenina betsaka ao Senegaly@EuroDigitalLang (Eoropa)
Artyom Malykh momba ny Udmurt, tenenina ao Udmurtia (repoblika iray mizaka tena any Rosia)
Inaciu Galán momba ny Asturian, fiteny teratany ao Asturias (Espàna)
Academie du Gallo momba ny Gallo, fiteny vitsy an'isa iray fantatra ao Bretagne (Frantsa), sy ny asan-dry zareo ho fampiroboroboana azy io
Eylem Bostanci momba ny Laz, fiteny iray an'i Torkia andalam-panjavonana
HIRIKA | VATSIM-PIANARANA & FIOMBONANA
Tratry ny tampoka ve ny vondrom-piarahamoninao rehefa nanery antsika an-tserasera ny valanaretina mba hamaly ireo filàna fototra, tsy mbola nisy hatrizay ? Te-hanampy amin'ny fanafainganana ny vondrom-piarahamonina misy anao ve ianao haharaka ny vaovao farany, hisian'ny hoavy izay anisany ampahany manan-danja eo amin'ny fiainantsika ny fifandraisana mora vidy ? Mikatsaka ny hanohana ireo mpiara-miombon'antoka mahazo vatsy amin'ny fampifandraisana ny fisarahana nomerika manerana an'i Etazonia ny Digital Inclusion Fellowship atolotry ny NTEN . Fetra farany : 24 Jona 2022
Te-hitantara an'ireo tantara tsara indrindra ao Afrika, amin'ny fomba tena mahasarika ny mpihaino anao izay monina ao ve ianao ? Miaraka amin'ny mpiara-miasa Africa No Filter, manolotra fampianarana araka izay mety aminao ny Orina Thomson, izay tsy hoe mampianatra anao fotsiny ny tokony hatao amin'izany, fa manampy anao ihany koa hampahafantatra ireo tantaranao amin'ny mpihaino tanora, mpihaino voalohany amin'ny finday manerana an'i Afrika. Jereo eto azafady raha mila fanazavana mikasika ny fampianarana sy antsipirihany mifandraika amin'izany.
ANTSO HO FANDRAISANA ANJARA
Fiantsoana ireo mpianatra dingana voalohany sy ireo ambaratonga ambony eran-tany : Inona no mety ho ambaranareo mba hiatrehana ny sasany amin'ireo fanamby tena maika amin'izao androntsika izao, amin'ny alalan'ny fiarahana amin'ireo tanora mpandraharaha toa anareo? Ny Fishbowl Challenge dia manasa anareo hamondrona ny herinareo amin'ny fitondrana fanovàna ara-tsosialy miaraka amin'ny herin'ny teknolojia ! Azo jerena eto ny antsipirihan'ny fifaninanana. Daty farany fandraisana anjara : 18 Jona 2022.
Mitantana SME ve ianao sa startup avy ao Afrika izay mikendry ny hanome vahaolana nomerika hisian'ny fiantraikany miabo ara-tsôsialy mahomby ao amin'ny faritra ? Asaina ianao handray anjara amin'ny 2022 Africa Digital Innovation Competition! Raha te-hahalala bebe kokoa, eto no fotoana. Daty farany fandraisana anjara : 30 Jona 2022
Miasa amin'ny orinasa tsy misy fidiram-bola ve ianao, izay mikatsaka ny hisy vokany amin'ny alalan'ny fanabeazana, fandraharahana na fampandrosoana ny hery mpamokatra ? Ny Team4Tech dia mitady hanohana ireo fikambanana toa ny anareo miaraka amina vahaolana ara-teknolojia sy fanofanana mba hanampiana anareo amin'ny fampandehanana ny iraka tontosainareo hiakatra amin'ny zanatohatra ambony. Ho hitanao eto ny antsipirihany bebe kokoa mikasika an'ity hirika fiarahamiasa ity. Daty farany fandraisana anjara : 1 Jolay 2022
Inona ny WCAG & ahoana no fiasan'io aminao ? avy ao amin'ny InclusionHub (amin'ny fiteny anglisy)
Vehivavy sy ny aterineto : toerana nahazoana aina mandra-piovana ho tsy izany intsony avy amin'ny Paradigm Initiative (amin'ny fiteny anglisy)
Misorata anarana hahazo ny taratasim-baovaon'ny Rising Voices
Misaotra an'i Eddie Avila and Ameya Nagarajan noho ny fandraisany anjara tamin'ity taratasim-baovao ity.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 23 ora izay